राजनीति जोगाउन फेरि लाखौं जनताले ब’लिदान दिनुपर्छ: बाबुराम भट्टराई – Paluwa Khabar
कार्तिक ३, २०७८ बुधबार 118
जनता समाजवादी पार्टी जसमा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा । बाबुराम भट्टराईले वर्तमान उपलब्धि जोगाउन फेरि लाखौंको बलिदानी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । संविधानसभा सदस्य मञ्च नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संविधानको मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभा वि’घटन
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले अहिलेको संविधान जनताले जन्माएको संविधान भएकाले यसलाई जोगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाली जनताले पहिलो पटक बनाएको संविधान हो अहिलेको संविधान। यसअघिको संविधान राजा–महाराजाले बनाएका थिए।
हामीले बच्चा त जन्मायौँ । हुर्काउने काम पनि हाम्रै हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई मुर्छित बनाए । उनले भने, ‘ओलीले संविधानलाई मुर्छित बनाएका छन् । यसलाई बचाउने जिम्मा हाम्रो हो ।’ लोकतन्त्र नै चुनाव भन्ने बुझाइ गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘केहीले लोकतन्त्र नै चुनाव भन्ने अर्थमा लिएको बुझिन्छ ।
म इतिहासबाट मिल्काइनुपर्ने पात्रको हातमा सत्ता चलाउने जिम्मेवारी पुग्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको बुझाइ छ । भट्टराईले, ‘क्रान्ति परिवर्तन भएको कालखण्डमा परिवर्तनकारीहरुले नै नेतृत्व पाउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । संविधानसभापछिको नेतृत्व गलत मानिसको हातमा गयो । अहिले पहिरो गइसकेको छ।
अझै खतरापूर्ण हुने अवस्था देखिन्छ। ओलीले प्रतिसोध साँध्न चाहेका छन ।’क्रान्ति पूरा नै गर्न नपाउँदा परिवर्तनलाई संस्थागत नै गर्न नसकिने अवस्था बनेको उनले बताए ।
भट्टराईले भने, ‘अब हामीले नयाँ हिसाबले अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यस्तो भइराख्छ भनेर हामी चुप लागेर बस्यौं भने झनै असहज हुन्छ। अब जनतालाई सडकमा उतारेर अर्को जनआन्दोलन जरुरी छ।’
Prevपुण्य गौतमको राजनीतिमा छ’लाङ, माधव नेपालले आजै सुम्पिए यति ठूलो जिम्मेवारी !
Nextभ्र’ष्टाचारिको नाइ’के ओली संग चुनाव ल’ड्न म एक्लै काफि छु : दिपक मनाङे
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहिले कुन दर्ता भए ? कहाँ छन् केन्द्रीय कार्यालय ? यस्तो छ नालिबेडि